A Wanderer's Notebook: ပိတောက်တွေရွှေရည်လူးပြန်တော့ …..
“မြို့မငြိမ်း” ၏ “နတ်ရှင်နောင်” သီချင်းတွင် ….
“ပိတောက်တွေရွှေရည်လူးကြမယ့်အခြေ ……. ၊ ပုလဲငုံ စံပယ်ဖြူ ဖူးခက်ခက်ဝေ ၊ပန်းမျိုးစုံ ရာသီကုန်ဖူးခဲ့ ပေါ့လေ ၊ ချစ်သူကို ရည်စူး ခူးတယ်လို့ချွေ”…….
သင်္ကြန်ပွဲတော်တွင် အဝေးရှိချစ်သူကို ရည်ရွယ်ပြီး တောတောင်ထဲတွင်ပွင့်သော ပိတောက်ပန်းကို ခူးချွေခဲ့သော စာဆိုစစ်သည်နတ်ရှင်နောင်ကို စိတ်ကူးယဉ်လွန်းသူဟု ကျတော်မဆိုဝံ့ပါ ။ အပြစ်တင်ချင်း တင်ရလျှင် လွမ်းအောင်ဖန်တတ်သော ပိတောက်မင်းကို သာ ကျတော်အပြစ်ဆိုမည် ။ ပိတောက်မရှိ လျှင်သင်္ကြန် သည် အတော့်ကို မပြည့်မစုံ အထီးကျန်လိမ့်မည် ။ ပိတောက် ရှိပြီး ချစ်ရမည့်သူ အနားမှာ မရှိလျှင်ကော …… . ။
တစ်နှစ်တစ်ခါသာ ပွင့်သောပိတောက်ပန်းသည် တန်ဖိုးထားဖွယ်ပင်ဖြစ်သည်။
သင်္ကြန်ရက်တွင်း အိပ်ယာမှနိုးနိုးချင် “ဟေ့ သည်နေ့ပိတောက်တွေပွင့်ပြီ ဟေ့” လို့သော ၀မ်းမြောက်မြူးတူးသံနှင့် သတင်းစကားသည်လည်း ကျွန်တော့်ကို လှုပ်နိုးတတ်မြဲ ။ ချက်ချင်းပင် ပိတောက်နံ့မွှေးလာသည် ။ ပိတောက်သည် အထွက်အမြတ်ထားစရာ ပန်း …. ။ မြတ်စွာဘုရားကိုလည်း ကပ်လှူရမည် ။ အိမ်မှအမေ့အတွက်လည်း ခူးရမည် ။ ခင်မင်ရာ မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ဝေငှရမည်။ နောက်သင်္ကြန်ရက်များအတွင်း ရေပက်ခံထွက်ကြမည် ။ သင်္ကြန်သီချင်းတွေ ဆိုကြမည် ။ ခင်မင်သူ တွေကို ရေလောင်းမည်။ နောက်နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့တွင် သင်္ကြန်လွမ်း ဝေဒနာကို ခံစားရင်း မိဘတွေနဲ့ ကျောင်းကန်ဘုရားသွားရင်း နောက်နှစ်သင်္ကြန် မြန်မြန်ကျပါစေလို့ ဆုတောင်းမယ် ။ နောက်နှစ်ဆန်း (၁) ရက်နေ့ အထိမ်းအမှတ် စာအုပ်တစ်အုပ် အမှတ်တရ၀ယ်မည် ။
ဒါသည် သင်္ကြန်ခံစားမှုဖြစ်သည်။ လျှောက်လည်ဖူးသမျှ သင်္ကြန်များတွင် (၉) တန်းဖြေပြီး (၁၀) တန်း ကျူရှင်များကို တတ်နေရသည့်နှစ်က သင်္ကြန်သည်အပျော်ဆုံးဖြစ်သည်။ သင်္ကြန်တွင်း ကျက်ရန်စာများရှိသည့် တိုင် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ရသော အရသာသည် တော်တော်ကြည်နူးဖို့ကောင်းပါသည် ။
ခုတော့ သင်္ကြန်အရသာကို တမ်းတနေရသည်မှာ (၃) နှစ်ကျော်လေပြီ ။ မ န္တလေးတွင် သင်္ကြန် မဏ္ဍပ်တို့ တည်ဆောက်လို့ အပြီးသတ်စအချိန်ဆိုရင် ကျတော်ပြန်လာခဲ့ရသည်ချည်း ။ ငယ်ငယ်ကလောက် ခံစားမှုမနုနယ်တော့သော်လည်း ဆွတ်ပျံ့မှုတော့ဖြင့် ခံစားနေရဆဲဖြစ်သည်။ ခင်မင်သူတစ်ယောက်၏ သင်္ကြန် အကြိုဆိုပြီး စတိရေလောင်းခံရသည်မှအပ သင်္ကြန်ရေ စိုစိုရွှဲခြင်းကို မခံစားရသည်မှလည်းကြာချေပြီ ။
ဒါပေမယ့် တစ်နှစ်တစ်ခါ အချိန်မှန်လှသော သင်္ကြန်ရက်ကို မေ့လျော့ထားနိုင်ဖို့တော့ မဖြစ်ပါ ။ ခံစားချက်အချို့ကို မျိုသိပ်ထိန်းသိမ်း ရမည့်အရွယ်ရောက်လာသည့်တိုင် ရင်ထဲတွင်တော့ သည်အချိန်ဆို ဆွတ်ပျံ့လာဆဲ ။ တစ်စုံတစ်ခုသော အခြေအနေ (ကျတော်ကိုယ်တိုင်လည်း မည်သို့သောအခြေအနေကို လိုချင်မှန်း မိမိကိုယ်တိုင်မဝေခွဲနိုင်ပါ ) ကိုတမ်းတဆဲ …….. ။ ငယ်က သူ့အတွက်ခူးခဲ့တဲ့ ပိတောက်ဦးကို လည်း သတိရဆဲပါ ….. ။
နက်ဖြန်ကျမည့် သင်္ကြန်အတွက် ကဗျာဆရာအချို့ရဲ့ သင်္ကြန်ဖွဲ့ကဗျာများကို အမှတ်တရ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ပျော်ရွှင်ဖွယ် နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ ………….. ။
မြမြဖူးရယ်တဲ့ ခိုင်ရွှေဝါ ။
နန္ဒမူ ဖန်ဂူ ထိပ်မှာလ
ပွင့်ရှာကြ စုံမြိုင်တွင်း ။
ပန်းပိတောက်မင်း ။ ။
ပန်းပိတောက်များ ။ ။
ရွှေဝါဖူး ပိတောက်တွေ ပွင့်ပေါ့ဝေေ၀ ။
အတာရေ ဖြာဝေလို့ စိုလန်း ။
ချစ်ဦးမာပါစေ - တဲ့
ထွန်းတင့် နှစ်ဆန်း ။ ။
(ဆရာ ဒဂုန်တာရာကတော့ ချစ်သူအတွက် ပိတောက်ဖူး ခူးရန်ကြံတဲ့ လုလင်တစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်ကို ကဗျာဖွဲ့ခဲ့တယ်….. )
အို … လှလိုက်တာ
ကိုင်းငိုက်ယိုယီး ၊ တွဲလောင်းစီး၍
ရွှေသီးဝါသွေး ၊ ပြွတ်သိပ်လေးအောင်
ညွတ်ကွေးရွရွ ၊ လှ … လှ … သည်
“ဟော … ဟော … ပွင့်ပြီ”
ကျူးရင့်အော်ကြ ၊ တံခါးဝမှ
၀င်းဝါပိတောက် ၊ သစ်ပင်အောက်ဝယ်
လုကောက် ကြွေသည့် ပွင့်များကို။
လုယက်ခုန်တက် ၊ ဓားလက်နက်ဖြင့်
ကြေပြုန်းလဲကျ ၊ ဒဏ်ရာရနှင့်
ရွက်မြပြာညို .၊ သစ်ငုတ်တိုသာ
ဖရိုဖရဲ ကျန်ရစ်၏ ။
မေခင်နှမ ၊ ဆံကေမြထက်
ဆင်ပေး ထုံးချင်လှသောကြောင့် ။
ပင်ခြေအောက်တည့် ၊ ငါ ရပ်ကြည့်၍
ကြွင်းသည့်တစ်ပွင့် ၊ ကောက်မည်လင့်သော်
“အို … ရှင့် … ကျွန်မ
ဗုဒ္ဓမြတ်ထံ ၊ လှူကပ်ရန်” ဟု
လုပြန်အတင်း ၊ ဆိုကာချဉ်းသော်
လက်ချင်းဆုံ၍ နေသတည်း ။ ။
(ဆရာမကြီး ကြည်အေးကတော့ မျှဝေခံစားမည့် ချစ်သူမရှိလျှင် အထွတ်အမြတ်ထားရာ ပိတောက်ဦးပင် အချည်းနှီး ဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုပြန်ပါတယ် … )
ကဗျာဆိုတာ စာဆိုရဲ့ စိတ်ကြေးမုံလို့ဆိုကြတယ် ။ အချို့က သင်္ကြန်ကို ချစ်တယ် ။ ကြည်နူးတယ် ၊ သာယာတယ် ။ အချို့ကြ စိတ်နာတယ် ၊ကြေကွဲကြတယ် ၊ ၀မ်းနည်းတမ်းတတတ်ကြတယ် ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သင်္ကြန်ဆိုတာ သာမန်အားဖြင့်ချစ်စရာ မြန်မာ့ဓလေ့တစ်ခုပါ ။ အားလုံး ပျော်ရွှင်ကြပါစေ…. ။
နှစ်အကူး …. လည်းသာပါစေ ။
မောင့် ချစ်ဦးလည်း …. မာပါစေ ။ ။
(၂၀၀၈ - သင်္ကြန်ကို ကြိုဆိုခြင်း)
(၁၂၊ ၄၊ ၂၀၀၈)
Posted by Aung Phyoe at 22:28
Labels: ကဗျာ, အထိမ်းအမှတ်စာ
ချစ်ရမ္မက် - အပိုင်း (၃)